Ady amin’ny tsy fandriampahalemana :: Hasiana tobin’ny Tafika manara- penitra any Tsaratanàna • AoRaha
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Hasiana tobin’ny Tafika manara- penitra any Tsaratanàna
Mitohy ny ady. Ofisialy ankehitriny fa ao Bekapaika-Tsaratanàna no hapetraka voalohany ny toby miaramila vaovao manara-penitra antsoina hoe : “Bataillon opérationnel avancé” na BOA. Nidina nijery izany tany an-toerana, omaly, ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny jeneraly Ravaloma­nana Richard, Sekreteram-panja­kana miadidy ny Zandarima­riam-pirenena.
Nilaza ny Praiminisitra fa: “hatomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana an’io toby io ary ny fanjakana no hiantoka manontolo ny vola lany rehetra”.
Hanara-penitra ity toby ity satria hisy an’izay rehetra ilain’ny miaramila ao anatiny. “Tsy ny ao anatiny ihany fa na ny manodidina ihany koa dia hametrahana sekoly, toby fitsaboana, sy izay mety ilain’ny mponina sy ireo miara­mila. Tsy hianona fotsiny amin’ ny fampandriana fahalemana maharitra ireo Tafika fa hanampy ihany koa amin’ny fampandrosoana ny faritra”, hoy ny loharanom-baovao.
Nosafidiana manokana ny faritra Betsiboka, indrindra ny any Tsaratanàna, satria tany amin’ity toerana Bekapaika ity no nisian’ilay fakàna an-keriny mpitsabo mpanampy, volana vitsy lasa izay. Tsy lavitra tao ihany koa no nisian’ny fianjeran’ny angidimby nitondra an’ireo mpitandro filaminana nanenjika ireo jiolahy mpaka an-keriny, tamin’ny volana marsa lasa teo.
Fahavoazana mpividy omby :: Jiolahy nandroba vola an-tapitrisany maro